Twazzup: Nchịkọta oge maka Twitter | Martech Zone
Twazzup: Real-Monitoring maka Twitter
N'uche nke m, Twazzup nwere interface dị mma, nwekwuo ike karịa karịa Twitter na-eme n'ihi ozi ọ na-enye onye ọrụ. Iji malite na Twazzup, banye na njikwa Twitter, isiokwu ma ọ bụ hashtag - na njirimara onye ọrụ na-enye nhazi dị ọcha na isiokwu ndị metụtara ya gafee elu, onye ọrụ na ihe ọmụma na-aga n'ihu n'akụkụ aka ekpe, na tweets ozugbo na akụkụ aka nri.
Arụ Ọrụ Mouse
Na ihe atụ a, emere m ọchụchọ Nkwupụta Ahịa, na-achọ ịmata ihe mkparịta ụka nke nwere ike ime na ntanetị gbasara onye na-akwado anyị, TinderBox. Ozi ọma ahụ bụ na Martech Zone a hụrụ dị ka n'elu emetụta profaịlụ mgbe ọ na-abịa amụma ahịa, ma ọ pụtaghị na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-eme ebe ahụ.
Okwu okwu na-ewu ewu nwere ike ịbụ nkwado ahịa, ụdị ndị nne na nna maka nyiwe atụmatụ ịre ahịa. Anwalere m ya ma chọpụta ụfọdụ ndị na-eme ihe ike na mkparịta ụka gbasara isiokwu a… mana ọ ka enwebeghị mkparịta ụka zuru oke iji debanye aha Tweets Per Hour (TPH) na ihuenyo. Yabụ ... ka anyị gbagoo ọzọ na usoro nke isiokwu - # ahịa. Ọganihu! E nwere 155 Tweets Kwa Oge na isiokwu ahụ.
Ya mere - ndụmọdụ m nyere onye ahịa m nwere ike ịbụ ka na-arụ ọrụ iji wulite mmetụta maka hashtags na isiokwu maka nkwanye ahịa na nkwado ahịa, ma n'ikpeazụ ha kwesịrị ịnọ na mkparịta ụka na okwu kachasị ewu ewu sales. Nke ahụ na-aga maka atụmatụ ọdịnaya ha - uru ụlọ gburugburu okwu ahịa yana ịchekwa ndị metụtara ahịa na ngalaba ụlọ ọrụ iji nweta okwu ahụ na ngwaahịa ha.
Twazzup na-eme ka ọrụ a dị mfe!
Tags: chọta twitter influencersnyochaa hashtagsozugbonwachukwuTwitter
Ọkt 10, 2014 na 4:01 PM
Ndewo Doug, a na m eche ma ị ga - enyere m aka. Ruo ihe dị ka otu izu ugbu a enweghị m ike ịnweta Twazzup. Ọ na-eziga m na ihuenyo nke na-akpali m ịbanye na Twitter. Mgbe m rutere na ihuenyo ahụ, ọ na-awụghachi ozugbo na ihuenyo Twazzup oroma. Enwere m ike ịbanye na Twitter.
Ọkt 10, 2014 na 4:27 PM
Achọpụtala m na nke a na-eme mgbe agbanyụrụ kuki mgbe ụfọdụ na ndị ọrụ. Are na-egbochi kuki na mwube ihe nchọgharị gị?